Amagama Kahoot - Epholile, Amagama Egama Elihle Ongawathanda - Uhlu
Amagama we-Kahoot akusiza ukuthi wenze ubunikazi obuhlukile online. IKahoot ingelinye lamawebhusayithi ezemfundo athandwa kakhulu kwi-inthanethi.
Ungadlala imidlalo ngenkathi ufunda. Kuyisengezo esihle kakhulu kulabo abajabulela izindlela ezimnandi nezintsha zokufunda. Othisha nabafundi basebenzisa le nkundla ukwenza ukufunda kujabulise wonke umuntu. Ungamangala othisha bakho ngamagama athile ahlukile. I-athikili ilungele wena obheke ukuthola igama elihlukile ozohambisana ne-akhawunti yabo.
IKahoot iyipulatifomu yokufunda ethandwa kakhulu phakathi kwabafundi nothisha. Izikole ziyisebenzisela ukwenza imfundo ijabulise ngo-2020. Uma ungomunye wabafundi abebeyipulatifomu, manje sekuyisikhathi sokwenza isipiliyoni sijabulise ngokwengeziwe. Kuqinisekisa ukuthi amakilasi aqala ukuzibandakanya kakhulu. Othisha bangabona futhi ukubamba iqhaza okusebenzayo kwabafundi.
Ungayisebenzisela amakilasi anomthelela abafundi abawajabulela kahle. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zemisebenzi efana ne-Quizzes, Puzzles, Jumbles, nezingxoxo. Faka ungqimba lokuzijabulisa ezifundweni zakho ngalobu buchwepheshe obujabulisayo.
Amagama Eqembu le-WhatsApp angama-350 +
Ungaliguqula igama lakho libe iKahoot?
Abantu abaningi abaqiniseki ukuthi kungenzeka yini ukushintsha igama endaweni yesikhulumi. Abasebenzisi abakwazi ukushintsha igama labo lomsebenzisi. Unquma lokhu lapho udala i-akhawunti yakho kuwebhusayithi. Yigama elihlala unomphela ku-akhawunti yakho. Abasebenzisi, noma kunjalo, bangashintsha amagama abo okuveza ku-akhawunti.
Izinyathelo Zokushintsha Igama Lakho kuKahoot:
Abasebenzisi abafuna ukushintsha amagama abo okuboniswa kungxenyekazi bangakwenza kalula lokho kulesi sigaba. Ungabheka zonke izici lapha.
Abasebenzisi bangaqala ngokungena ngemvume kuma-akhawunti abo akhona. Ungakwazi Chofoza lapha .Inketho yokungena ngemvume iyatholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla. Chofoza le nkinobho bese ufaka imininingwane yakho.
Kufanele uqale ngokuvakashela i-akhawunti bese uyazama. Ungachofoza isithonjana kungxenyekazi ye-akhawunti yakho. Chofoza kuzilungiselelo ukushintsha igama le-akhawunti yakho.
Inqubo iqala ngokushintsha igama ku-akhawunti yakho. Kukhona izinketho ongakhetha kuzo igama elisha lokubonisa lapha kalula.
Kuyinqubo yokushintsha igama lakho le-Kahoot kusuka ku-PC. Abasebenzisi futhi bangasebenzisa kahle lo mhlahlandlela ukushintsha amagama abo kusuka kumafoni abo.
Amagama Akhiqiza i-Kahoot:
Kunezindlela eziningi zokuthola amagama amasha we-Kahoot. Abasebenzisi bangathola kalula amawebhusayithi akhiqiza amagama ku-inthanethi ukwenza amagama amasha. Sizokukhombisa izinketho ezimbalwa zokwabelana ngegama lakho nekilasi ngokushesha.
1. Okungahleliwe Igama Generator
Umkhiqizi wegama elingahleliwe muhle kubasebenzisi ababheke phambili ekushintsheni amagama abo. Ungathola iziphakamiso zamagama ezipholile lapha. Iwebhusayithi ikunika amathani ongakhetha kuwo, futhi ungawasebenzisela ukuthola ukunakwa okungcono kakhulu kwawo wonke umuntu.
Abasebenzisi bangacacisa ubuningi kuwebhusayithi futhi banqume ngezinketho. Ungaqala okuncane kusuka ku-20 bese ukhuphukela ku-100. Kunamathani emibono azofakwa kule webhusayithi. Kukhona nezinye izinketho, futhi.
Ungakhetha i-generator yegama ezinhlotsheni ezahlukahlukene.
2. Umakhi wegama
Umenzi wegama lewebhusayithi ulusizo kubasebenzisi. Kunamathani wezinketho ezitholakalayo kusayithi. Sincoma i-generator ehlukile yokusebenzisa igama lakho. Sincoma ukuthi udlule kuzinketho ezivulekile. Khetha uhlobo lwe-Kahoot name generator ukuze uthole imiphumela yakho.
Imiphumela ivela ngokushesha nje lapho ufaka izinketho zakho ezidingekayo. Lokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi uthola umbono omuhle kakhulu wokuthi yini evumelana nesitayela sakho. Izokunikeza imibono yamagama ahlekisayo, ahlakaniphile, noma aphelele.
I-spinxo generator pro ingenye yesikhulumi. Abasebenzisi bangakha kalula amagama amasha apholile ngale webhusayithi. Ilungele abasebenzisi abafuna ukuthola amagama abasebenzisi apholile ama-akhawunti abo. Kukhona izinketho zokushintsha igama lakho endaweni yesikhulumi kalula.
Abasebenzisi kufanele bafake imininingwane ethile edingekayo. Ngokushesha uzothola iziphakamiso ezithile ukuze uqale ukushintsha amagama akho we-Kahoot.
Imibono Yamagama Kahoot:
Nayi eminye imibono yamagama epholile esizoyiphakamisa kubo bonke abafundi bethu.
Siyethemba ukuthi lezi zizokunikeza imibono emihle yegama lomsebenzisi wakho olandelayo we-Kahoot. Zama lokhu namuhla bese uqala ukwabelana ngekilasi lakho ngokuhleka okuhle. Sincoma ukuzama lokhu ngokushesha.
Amawebhusayithi Apholile Apholile ayi-15
Izibalo ze-Youtube namaqiniso
Ngabe iBluestacks iphephile? Yebo, Ungasebenzisa ku-Windows naku-Mac